TETIBOLAM-PANJAKANA 2020 : Lany nasiam-panitsiana tamin’ny sabotsy lasa teo
Lany nasiam-panitsiana teny anivon’ny antenimieram-pirenena, tamin’ny sabotsy lasa teo ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2020. 2 décembre 2019
Tsy nisy fanovana goavana fa teboka iray ihany no novaina tao anatiny. Tsy inona io teboka novaina io fa ny mahakasika ny tataon-ketra alaina amin’ny akora fototra hanamboarana savony eto Madagasikara. Nanambara ny depiote eny Tsimbazaza fa entana ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro ny savony ka raha miakatra ny hetra alaina aminy dia voatery miakatra koa ny vidiny eny amin’ny mpaninjara. Araka izany, nahitsy ny fampiakarana ho 20 isan-jato ary notazonina ho 10 isan-jato ihany ny hetra alaina amin’ity akora fototra ity.
“Tsy ilaina ny fampiakarana ny tataon-ketra amin’ny akoro hanaovana savony satria miankina amin’io ny fiainantsika Malagasy. Tsy afaka misaraka amintsika ny savony na maraina na antoandro na hariva ampiasaina foana. Raha miakatra ny vidin’io dia mazava ho azy fa hidangana koa ny vidim-piainana eto Madagasikara ary mety hisy krizy goavana aterak’izany”, hoy ny Depioten’i Mampikony, Raphaelien Solofoniaina.
Nomena lanja ao anatin’ny tetibola 2020 koa ny mahakasika ny resaka sosialy.
Voakasik’izany ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka, fampiroboroboana ny fampianarana, fampandriana fahalemana manerana ny Nosy sy ireo maro hafa. Miavaka amin’ny fampiasana ity tetibola ity koa ny mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa manara-penitra mamaly ny filan’ny mponina sy ny fizorana tsikelikely mankany amin’ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Nezahina nampifanarahana amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ny tetibola mba hanatrarana ny tanjona sy ny fanamby efa napetraky ny fitondram-panjakana.
Tazomina ho 5,5 isan-jato ny harin-karena
Taorian’ny fahalanian’ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2020 tao amin’ny antenimieram-pirenena, nanambara avy hatrany ny Minisitry ny vola sy ny tetibola fa vonona amin’ny fampiharana azy ny fitondram-panjakana. Tanjona hapetraka, hoy izy, ny fihazonana ny harin-karena ho 5,5%. Hotazomina ho 11,5 koa ny tataon’ny famorian-ketra na ny PIB. Hita ao amin’ity lalàna ity koa ny fandaniana ny volam-panjakana. Araka ny tarehimarika nambaran’ny minisitra, mahatratra 10 049miliara ariary ny vola natokan’ny fanjakana handoavana ny karaman’ny mpiasa toy ny mpampianatra, ny mpitsabo, ny miaramila ary ireo rehetra karamain’ny fanjakana ka manana ny nomerao maha mpiasam-panjakana. Tsiahivina fa mbola handalo holaniana sy hodinihana eny amin’ny antenimieram-doholona ity volavolan-dalàna ity aorian’izao.